Mahafinaritra kokoa izao any Filipina amin'ny fandroana mafana sy miala sasatra ao Kawa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany mikasika ny Filipina » Mahafinaritra kokoa izao any Filipina amin'ny fandroana mafana sy miala sasatra ao Kawa
Hospitality Industry • LGBTQ • Vaovao • People • Vaovao farany mikasika ny Filipina • fanorenana • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Kawa bath any Antique
Ny tsiky Filipiana dia majika madiodio ho an'ny maro manerantany, ary ity Firenena Azia Atsinanana izao dia vonona handray ny mpitsidika izao.
Maninona raha soso-kevitra ny handro any Kawa. Ny Departemantan'ny Fizahan-tany any Filipina dia mampanantena fa ho ambanivohitra. ary traikefa miala sasatra
Ny Departemantan'ny Fizahan-tany any Filipina (DOT) dia miomana handray ireo mpitsidika indray, mamolavola hetsika vaovao tsy tapaka ho an'ny mpandeha izy io ary manome toky fa mifanaraka amin'ny toerana samihafa ny protokolon'ny fiarovana iraisam-pirenena.
Tena mahafinaritra kokoa izany any Filipina, miaraka amin'ireo hetsika karakarain'ny DOT hanolotra traikefa vaovao sy tokana ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena. Ny governemanta Filipina dia manomana ny fandraisana azy ho an'ireo mpandeha amin'ny fampandrosoana fotodrafitrasa ao anatin'izany ny fanatsarana ny seranam-piaramanidina eto amintsika sy iraisam-pirenena ary ny làlambe vaovao izay miantoka ny fidirana haingana any amin'ireo toerana itodihantsika isam-paritra, "hoy ny sekretera momba ny fizahantany Bernadette Romulo-Puyat.
Miaraka amin'ny nosy 7,000 mahery manome traikefa tokana ho an'ireo mpitsidika, dia toerana tsy itoviana amin'ny toeran-kafa i Filipina. Na miala sasatra eny amoron-dranomasina na eny an-tendrombohitra, mankafy ny fiainana an-tanàn-dehibe, na miditra amin'ny kolontsain'ny vazimba teratany, traikefa isan-karazany ho an'ny karazana mpandeha rehetra.
Ireto misy hetsika valo mampiavaka ny filoham-pirenena azon'ny olona andrana avy amin'ny faritra samihafa amin'ny firenena:
1. Mandeha bisikileta manodidina an'i Intramuros amin'ny bisikileta volotsangana
Raiso ny dianao bisikileta amin'ny alàlan'ny bisikileta volotsangana. Bambike Ecotours dia manolotra fotoana hijerena ilay tanàna misy rindrina manan-tantara ao Intramuros amin'ny fomba hafa. Ireto bisikileta volotsangana ireto dia misy safidy maro ho an'ny fandehanana azo antoka sy ahazoana aina miaraka amin'i Bambassadors izay mpitari-dalana amin'ny ody mampiavaka an'i Old Manila.
2. Mizotra mamakivaky ny lalana mihodinkodina any Banaue amin'ny bisikileta hazo
Inona no fomba tsara indrindra hankafizana ny sary mahafinaritra momba ireo tanimbary vita tanana nataon'olombelona 2,000 taona tao Banaue? Eny tokoa, miaraka amin'ireo scooter hazo vita sokitra tanan'ny vondrona indizena iray ihany, mazava ho azy! Namboarina tamin'ny tapa-kazo sy sombin-kodiarana vita amin'ny kodiarana taloha, ireto kodiarana roa ireto dia afaka mandeha haingana tahaka ny 50kph, ary tena manaporofo ny kanto sy ny faharanitan'ny vahoaka Ifugao.
3. Hizaha toetra ny fandanjalanjanao amin'ny vodin-kazo ao Cebu
Ny Kadang-Kadang na ny tohotra Bamboo dia ahafahan'ny mpitsidika mahita an'i Filipina avy amin'ny fomba fijery somary avo kokoa. Ireo mpizahatany any Cebu dia afaka manandrana ny fandanjalanjany sy ny hafainganan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fitsambikinana amina vodilanitra sy fandraisana anjara amin'ny hazakazaka ekipa mihazakazaka (na mihozongozona) mandritra ny 100 metatra. Heverina ho toy ny lalao fahazaza nandritra ny taranaka maro lasa izay, dia nekena ho fanatanjahantena nentin-drazana teo ambanin'ny lalao ng Lahi tamin'ny 1969.
4. Mandehana an-dàlana amin'ny alàlan'ny Adventure Lahar any Pampanga
Ny fipoahana Pinatubo dia niteraka fahasimbana tamin'ny ankamaroan'ny Luzon afovoany, fa ny mponina kosa nahita fomba iray hampiasana ny fikorianan'ny lahar avy amin'ny volkano ary namadika azy io ho toerana iray ho an'ireo mpitia fanatanjahantena tafahoatra. Ireo mpitsangatsangana mila filatsaky ny hafainganam-pandeha dia afaka mamandrika fitsangatsanganana an-dalambe amin'ny moto 4 × 4 na môtô izay mandeha mamakivaky ny renirano sy ny faritry ny fasika mamaky ny iray amin'ireo tontolo miavaka indrindra eto Filipina.
5. Mialà sasatra amin'ny fandroana Kawa ao Antique
Ny Kawa na ny vilany goavambe dia matetika ampiasaina handrahoana fiaran'ny fiesta any Filipina, fa any amin'ny faritanin'i Antique dia manome traikefa an-doha sy miala sasatra izy io. Ireo mpitsangatsangana amoron-tendrombohitra dia miarahaba ny mpitsidika aorian'ny dianao any an'ala Tibiao miaraka amin'ny fandroana mafana mamelombelona ao anaty kawa, miaraka amin'ny rano mafana amin'ny afo kitay ary manitra miaraka amin'ny voninkazo sy voninkazo. Ireo izay te-hiaina karazana fitsaboana hafa dia afaka mitsidika ny Tibiao Fish Spa izay ahafahan'izy ireo manoboka ny tongony ao anaty dobo iray mba hohanin'ny trondro sy havoana.
6. Tsidiho ny Philippine Eagle any Davao
Tongava mitsidika ny voromahery goavam-be any Filipina, ilay voromahery lehibe indrindra eto an-tany. Ity karazan-doza tandindomin-doza ity dia voaro amin'ny toerana masina voafantina toy ny Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary any Davao. Ny fitsangatsanganana somary sarotra dia valisoa amin'ny fahitana zava-tsarobidy ao anatin'izany ny fahafaha-mijery an'i Filipina Eagles amin'ny sidina.
Raha mila topimaso maso vetivety dia mety misafidy ny hitsidika ny Philippine Eagle Center, ala mando tantanina ao an-tanànan'i Davao ireo vahiny ary miaro sy mamorona ny voromahery Eagles ho babo.
7. Ianaro ny Zavakanto zanatany amin'ny fanenomana ao amin'ny faritra Cordillera
Ireo foko any amin'ny faritry Cordillera dia manana kolontsaina manankarena voarary ao anaty lambany. Ity fitsangatsanganana ity dia mitondra mpandeha amin'ny fampisehoana mahaliana sy mampahafantatra ireo lamba novokarina tao amin'ilay faritra tamin'ny alàlan'ny landihazo sy kofehy voajanahary hafa voatenona sy kofehy ao anatin'ny volavolan-drazana nentin-drazana nolovaina hatramin'ny lasa. Ny fijanonana dia misy tanàna sy tranombakoka manenona, miaraka amina fotoana ahafahana miantsena fahatsiarovana ireo zavakanto vita tanana namboarina tao anaty akanjo manaitra na nampidirina amina haingon-trano.
8. Circuit Green Tour Organic (OGT)
Ity fizaran-tany ity dia mamantatra ny fakan'ny sakafo avy any Filipina amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana fitsangatsanganana biolojika sy sakafo nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny vokatra vao voajinja. Ny fitsidihana dia mamakivaky ny faritra Baguio-La Trinidad-Itogon-Sablan-Tuba-Tublay (BLISTT) miaraka amin'ny toeran'ireo fizahan-tany any Benguet Agro-Eco Farm any Sablan sy UM-A Farm any Tuba. Afaka maka ny vokariny manokana ny vahiny ary afaka mandray anjara amin'ny fankalazana nentim-paharazana nataon'ny vondrom-piarahamonina manodidina ny afo mirehitra eo afovoan'ny rivotra madio any an-tendrombohitra.
Dingana fiarovana azo antoka
Ireo hetsika ireo dia miandry ny fiverenanao any Filipina izay ifanarahan'ny fandraisam-bahiny eo an-toerana ny hafanan'ny firenena. Hararaoty ny traikefa niainanao tamin'ny fanandramanao ireo hetsika vaovao novolavolain'ny DOT tsy tapaka. Raha mbola miandry ny hisokafany indray izao tontolo izao, dia miatrika fiofanana tsy tapaka ireo mpiasan'ny fizahan-tany Filipiana. Ny orinasa dia mametraka fiarovana azo antoka amin'ny toerany mba hiarovana ny vahininy sy ny mpiasa ao aminy, mba hahazoana antoka fa ireo nahazo fankatoavana ihany no mahazo manokatra sy mandray vahiny.
Ny DOT dia nahazo mari-pankasitrahana iray an'ny SafeTravels Stamp avy amin'ny World Travel and Tourism Council noho ny nandraisany ireo «protokolà manara-penitra manerantany momba ny fahasalamana sy ny fahadiovana izay miantoka ny fivezivezena tsara mandritra ny areti-mandringana.
Ny governemanta Filipina amin'ny alàlan'ny Vondron'asa misy azy eo amin'ny maso ivoho ho an'ny fitantanana aretina miseho amin'ny aretina mihombo dia manavao hatrany ireo paikadiny mba hiarovana ireo mpandeha.
Mba hahafantarana ireo fanavaozana farany sy torohevitra momba ny dia momba ny fitsidihana an'i Filipina https://www.philippines.travel/safetrip
Namoaka fandaharam-potoana ririnina vaovao ny seranam-piaramanidina Frankfurt:...